R W Cabdi Weli: Ma jiro khilaaf u dhaxeeya aniga & madaxweyne Xasan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. R W Cabdi Weli: Ma jiro khilaaf u dhaxeeya aniga & madaxweyne Xasan * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
R W Cabdi Weli: Ma jiro khilaaf u dhaxeeya aniga & madaxweyne Xasan
By A warsame on 17th September 2014
Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed Maxamed, ayaa beeniyay warar dhawaanhan soo baxayey oo sheegayey inuu khilaaf ka dhex-tagan yahay isaga iyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Isaga oo ka hadlayay kulan uu la qaatay Jaliyada Soomaalida ee magaalada Birmingham ee dalka UK, ayaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya wuxuu ku tilmaamay wararka noocaasi ah kuwa been abuur ah.
C/wali Sheekh ayaa ku waramaayo in hanaanka dowladnimo dalka Soomaaliya uu yahay mid si wanaagsan u socda, Shacabka Soomaaliyeed ee dibada ku sugana ay iska daayaan aqrinta wararka been abuurka ah ee lagu qoro baraha Internet-ka.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaase qiray iney jiri karto kala feker duwanaansho, maadaama dadka aysan isku maan aheyn, laakiin hadafka laga wada duulaayo uu yahay u shaqeynta shacabka Soomaaliyeed.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo baxayey warar sheegaya in khilaaf u dhaxeeyo madaxweyne Xasan iyo R/wasaare C/weli, iyadoo arintaas la sheegay iney xoogeysatay kadib markii golaha wasiirada si kedis ah xilka uga qaadeen Agaasimaha Hay’adda Nabad Sugidda Soomaaliya, C/llaahi Maxamed Cali San-baloolshe.